यो साताका क्लिक (तस्बिरहरू) :: Setopati
सेतोपाटी फोटो टिम काठमाडौं, माघ १७
सेतोपाटी फोटो टिमले देशको राजनीति, समाज, कला, खेलकुद, घुमफिरलगायत क्षेत्रबाट छानिएका तस्बिरहरूको संगालो 'यो साताका क्लिक' लिएर आएका छौं।
आजको शृंखलामा माघ १० देखि माघ १६ गतेसम्म खिचिएका महत्वपूर्ण तस्बिरहरू समेटेका छौं।
मंगलबार बिहान काठमाडौंमा सूर्यदयसँगै आफ्नो गन्तब्य तिर जाँदै एक बटुवा। तस्बिरः नारायण महर्जन/सेतोपाटी
भैरहवाको एक मोटर ग्यारेजमा टिप्पर मर्मत गर्दै एक मजदुर। तस्बिरः भगवती पाण्डे/सेतोपाटी
घर निर्माणका लागि रड बुन्दै दाङका एक बृद्ध मजदुर। तस्बिरः विनोद सापकोटा/सेतोपाटी
राजधानीमा जारी प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलअघि ट्रफी सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित आर्मी र एपिएफका कप्तान। तस्बिरः निशा भण्डारी/सेतोपाटी
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं. ५ मणिग्राम सिद्धार्थपथकी सावित्रा भण्डारी कौशीमा लगाएको तरकारीमा पानी हाल्दै, सावित्राले घरको छतमा साढे चारसय बढी गमला तथा प्लाष्टिकका थैलामा तरकारी तथा फुलका विरुवा लगाएकी छन्। तस्बिरः भगवती पाण्डे/सेतोपाटी
भक्तपुरको पोट्री स्क्वावायरमा माटोको पैसा राख्ने खुत्रुके बनाउँदै एक महिला। तस्बिरः नारायण महर्जन/सेतोपाटी
मानव निर्मित लुम्बिनी परिसरको ताल। सुख्खा मौसममा भीडभाड देखिने यो तालमा चिसो मौसमका कारण आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहलपहल शून्य छ। तस्बिरः विनोद सापकोटा/सेतोपाटी
रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं. ४ सिमानगरमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको लागि राखिएको प्लाष्टिकका पाईपमा आगो लाग्दा निस्किएको धुँवाको मुस्लो। तस्बिरः भगवती पाण्डे/सेतोपाटी
सुर्खेतको बुलबुले ताल । सरसफाइ नगर्दा ऐतिहासिक महत्व बोकेको यो ताल फोहरले पुरिन लागेको छ। तस्बिरः विनोद सापकोटा/सेतोपाटी
काठमाडौंको साँखुमा एक महिने स्वस्थानी व्रतकथा तथा माधवनारायणको पूजा आराधनामा बत्त बसेका महिलाहरु खाली खुटुटा पुजा गर्दै। तस्बिरः नारायण महर्जन/सेतोपाटी
नेपाल संवतको आठौं शताब्दीदेखि सुरू भएका एक महिने माधवनारायण ब्रत एवं मेला बिहिबार बिहान हनुमानघाटस्थित त्रिवेणी धाममा स्नान गरी, सूर्यलाई अर्घ दिएर माधव नारायणको पूजा गरेपछि ब्रत सुरू हुदैं। तस्बिरः निशा भण्डारी/सेतोपाटी
भक्तपुरको चाँगुनारायणबाट हनुमानढोकासम्म कलश यात्रा क्रम्मा गुजु पल्टन आएर सलामी दिदैं। तस्बिरः नारायण महर्जन/सेतोपाटी
प्रतिगमनविरूद्ध आन्दोलनरत बृहत् नागरिक आन्दोलनमाथि बालुवाटारमा प्रहरीले पानीको फोहोरा र लाठीचार्ज गरेपछि एक युवाबाटोमा सुतेर बिरोध गर्दै। तस्बिरः नारायण महर्जन/सेतोपाटी
माघ १२ गते दाङस्थित राप्ती नदीमा निर्मित पुल उद्घाटन पछि निरिक्षण गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। तस्बिरः नारायण खड्का/सेतोपाटी
माघ १२ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाङमा उद्घाटन गरेको नेपालकै दोस्रो लामो पुल । राप्ती नदीमा निर्मित यो पुलले राप्ती र गढवा गाउँपालिकालाई जोड्ने गर्छ। तस्बिरः नारायण खड्का/सेतोपाटी
प्रतिगमनविरूद्ध आन्दोलनरत बृहत् नागरिक आन्दोलनमा आँखामा कालो पट्टी बाँधेर बिरोध जुलुसमा सहभागी एक युवती। तस्बिरः नारायण महर्जन/सेतोपाटी
बिहिबारदेखि साँखुस्थित शाली नदिमा लाग्ने एक महिने स्वस्थानी ब्रतमा सहभागी हुनका लागि पिसिआर परीक्षण गराउँदै ब्रतालु। तस्बिरः नारायण महर्जन/सेतोपाटी
विश्वकै दोस्रो अग्लो पाकिस्तानमा रहेको माउन्ट केटु हिमाल सफलतापूर्वक आरोहण गरेर स्वदेश फर्किएपछि भब्य स्वागतपछि हात हलाउँदैं नेपाली आरोहण टोली। तस्बिरः नारायण महर्जन/सेतोपाटी
पाटन आस्पतालमा स्वास्थकर्मीद्वारा कोभिड १९ विरुद्धको खोप इन्जेक्सनमा हालेर तयारी गर्दै। तस्बिरः निशा भण्डारी/सेतोपाटी
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. राजेन्द्र खनाल कोरोना विरुद्धको खोप लगाउँदै, अस्पतालका अरु चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले खोप लगाउन हिच्किचाएपछि डा. खनाल आफैले खोप लगाएर शुरुवात गरेका थिए। तस्बिरः भगवती पाण्डे/सेतोपाटी
बुधबारदेखि शुरु भएको कोभिडविरुद्धको पहिलो खोप लगाउँदै टेकु अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारी। तस्बिरः नारायण महर्जन/सेतोपाटी
पाटन अस्पतालमा बुधबारबाट सुरु गरिएको कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाउने क्रममा एक स्वस्थाकर्मीको प्रतिक्रिया। तस्बिरः निशा भण्डारी/सेतोपाटी
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ १६, २०७७, २२:००:००